Matongerwo eNyika, 07 Kukadzi 2019
VaMnangagwa Vanotadza Kuenda kuMusangano weKunamatira Runyararo Munyika
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vati musangano uyu ndewekuunza Zimbabwe yose pamwe chete kuitira kuti paitwe hurukuro dzekutsvaga nzira dzekupedza gakava riri munyika.
VaChamisa naVaMnangagwa Votadza Kusangana kuMisangano yeNhaurirano
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvinofadzwa nematanho enhaurirano akaparurwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa pamwe nevemakereke, ekuti munyika muitwe nhaurirano dzemapoka ose ane chekugadzikana kwenyika.
VaMnangagwa Vanoda Kucherechedzwa Nhaurirano Dzisati Dzatanga
Vachivhura musangano uyu waitirwa kuState House, VaMnangagwa vati nhaurirano dzisati dzaitwa mapato ese akapinda musarudzo dzegore rapfuura anofanira kutambira zvakabuda musarudzo idzi pamwe nemutongo wakaitwa neConstitutional Court zvichitevera gakava rakamuka musarudzo idzi.
Bishop Magaya Vanoti VaMnangagwa Havafanirwi Kutungamira Misangano yeNhaurirano
Mutungamiri wekereke yeZimbabwe Divine Destiny, Bishop Ancelimo Magaya, vanoti nhaurirano dzakanaka munyika asi hadzifanirwi kutungamirwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, sezvo vari munhu ari mugakava rezvematongerwo enyika.
Hukama hweBritain neZimbabwe Hworamba Huchishata.
Nyanzvi dzehupfumi dzinoti hukama hweBritain neZimbabwe hwuri kuramba huchishata panguva iyo Zimbabwe iri kutarisira kugadzirisa hukama hwayo nenyika dzekumavirira. Britain yakati ichatemera zvirango zvehupfumi kuvanhu vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.